စေတနာရှင် Blog သို့လာရောက်လည်ပတ်သူအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာ၍ လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေ...။ အကြံပေးလိုလျှင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းလိုလျှင်ဖြစ်ဖြစ် saytanarshin48@gmail.com ၊ Phone 0931126095 သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်...။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ အတွက် သိသင့်သိထိုက်တဲ့ ဗုဒ္ဓ၀င်အကျဉ်း
ဘုရားအလောင်းတော်သည် -၆၂၄-ဘီစီတွင် (မြန်မာလလို-၀ါဆို လပြည့်၊ကြာသာပတေးနေ့တွင်) မယ်တော်မာယာဝမ်းကြာတိုက်တွင်
သန္ဓေယူပါသည်။ဘုရားလောင်းသည် -၆၂၃-ဘီစီ၊ (မြန်မာလလို ကဆုန်လပြည့်၊ သောကြာနေ့)တွင် နီပေါနိုင်ငံ၊ လုမ္ဗိနီဥယျာဉ်၌ မယ်တော်မာယာဒေ၀ီ၊ခမည်းတော်သုဒ္ဓေါဒနမင်းကြီးတို့မှ မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။
ဘုရားလောင်း နာမည်မှာသိဒ္ဓတ္ထဖြစ်ပါသည်။(၁၆-နှစ်မှ ၂၉)နှစ်အထိ နန်းစည်းစိမ်းကို ခံစားပါသည်။)
အိမ်ရာတည်ထောင်လူ့ဘောင်ခွါကာ တောထွက်တော်မူပါသည်။ (သက်တော် ၂၉-နှစ် အရွယ် ဖြစ်ပါသည်။)
၂၉-နှစ်မှ ၃၅-နှစ်အထိ ဒုက္ကရစရိယာ-ပင်ပန်းသောအကျင့် ကျင့်ခဲ့ရပါသည်။)
ဘီစီ-၅၈၈-(မြန်မာလလို-ကဆုန်လပြည့်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)တွင် သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကိုရရှိတော်မူပါသည်။
(သက်တော် ၃၅-နှစ် အရွယ်ဖြစ်ပါသည်။)၄င်းဘီစီ-၅၈၈-(မြန်မာလလို-၀ါဆိုလပြည့် စနေနေ့)တွင် ပထမဆုံးသောဓမ္မစကြာသုတ်တော်ကို ဗာရာဏသီမြို့အနီး မိဂဒါဝုန် တောမှာ ဟောကြားတော်မူပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ဗုဒ္ဓဂယာနှင့် မိဂဒါဝုန်တောသည် -၁၈-ယူဇနာ/ မိုင်အားဖြင့်
ဓမ္မစကြာတရားပွဲမှာ လူသားအနေနဲ့ ပဉ္စ၀ဂ္ဂီငါးဦးသာ ပါဝင်ပါသည်။
၄င်းတရားပွဲမှာ အရှင်ကောဏ္ဍညသည်အရုဏ်မတတ်မီ သောတာပန်
နောက်ဆက်လက်ပြီး ဘုရားရှင်က-အနတ္တလက္ခဏသုတ်ကို ဟောသောအခါ ပဉ္စ၀ဂ္ဂီရဟန်းတော်ငါးဦးစလုံး ရဟန္တာ ဖြစ်တော်မူကြပါသည်။
ဘီစီ-၅၈၈-တွင် ဘုရားရှင်သည် ပထမဆုံးသာသနာပြုခရီးစဉ်ကို စတင် လုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဘီစီ-၅၄၃-(မြန်မာလလို-ကဆုန်လပြည့်၊ အင်္ဂါနေ့)တွင် ဘုရားရှင် သက်တော်(၈၀)၊၀ါတော် (၄၅)တွင် ကုသိနာရုံ၊ အင်ကြင်းတော၌ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူပါသည်။
ကဆုန်လဆုပ်(၅)ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် အလောင်းတော်ကို မီးပူဇော်ပါသည်။
ဘုရားရှင် သက်တော်(၃၅-မှ-၈၀)အတွင်း၊၀ါတော်အနေအားဖြင့် (၄၅)၀ါအတွင်းဟောကြားခဲ့သော ပိဋကတ်တော်များကို တစ်စုတစ်ဝေးတည်း စီးစဉ်ဖို့ရန်ဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီး တစ်လအကြာ--ဘီစီ-၅၄၃-မှာ ပထမဆုံး သင်္ဂါယနာကို ရာဇဂြိုလ်မြို့၊ သတ္တပဏ္ဏိလှိုဏ်ဂူ၌ ပိဋကတ်တော်များကို စုပေါင်းရွတ်ဆိုခြင်းဟူသော သင်္ဂါယနာတင်ကြပါသည်။
ပထမသင်္ဂါယတင်ပွဲမှာ ဦးဆောင်ဆရာတော်သည် အရှင်မဟာကဿပဖြစ်၍ အရှင်ဥပါလိမထေရ်က၀ိနည်းအရာတာဝန်ယူ၍၊ အရှင်အာနန္ဒာက သုတ္တန်အရာတာဝန်ယူပါသည်၊
အဖွဲ့ဝင်သံဃာတော် (၅၀၀) ဖြစ်ပါသည်။ ၀ါခေါင်လဆုပ် (၅)က စတင်ကျင်းပကာ(၇)လကြာပါသည်။ အထောက်အပံ့ဒကာတော်သည် အဇာတသတ်မင်း ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ဗုဒ္ဓပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီး ပထမသင်္ဂါယနာတင်ချိန်က စတင်၍
(အင်္ဂလိပ်လို-B.E) သုန်းကာ ဗုဒ္ဓသာသနာနှစ်ကို စတင်ရေတွက်ပါသည်။
“သင်္ဂါယနာ”ဟူသည် စုပေါင်းရွတ်ဆိုခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။
ဘုရားရှင်ဟောကြားခဲ့သော ပိဋကတ်တော်တို့ကို အရှင်မဟာကဿပစသော
မထေရ်အဆက်ဆက်တို့ ဆက်ကာဆက်ကာ ဆောင်ယူထိန်းသိမ်းခဲ့တဲ့ အစဉ်အလာကိုအစွဲပြု၍ “ထေရိက”၊ နောက် မထေရ်အစဉ်အဆက်တို့ ထိန်းသိမ်းခဲ့သောဗုဒ္ဓအယူဝါဒအနေအားဖြင့် “ထေရ၀ါဒသာသနာ”အဖြစ် အမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။
(BC -443/B.E-100) သာသနှစ် (၁၀၀)အရောက်မှာ ဝေသာလီမြို့၊
ဆရာတော်သည်အရှင်ယသဖြစ်ပါသည်။ အရှင်သဗ္ဗမိမထေရ်နှင့် အရှင်ရေ၀တမထေရ်တို့ကအဓိကတာဝန်ယူကာ ပိဋကတ်တော်များကို ရွတ်ဆိုကြပါသည်။ အဖွဲ့ဝင် သံဃာတော်(၇၀၀) ဖြစ်ပါသည်။ (၈)လ ကြာပါသည်။ အထောက်အပံ့ပေးသောဒကာသည်ကာလာသောက
(BC-249/B.E-300) သာသနာနှစ် (၃၀၀)အရောက်မှာ ပါဋလိပုတ်မြို့တော်၊
အသောကာရုံကျောင်း၌ တတိယသင်္ဂါယနာ တင်ပါသည်။ ဦးဆောင်ဆရာတော်မှာအရှင်မဟာမောဂ္ဂလိပုတ္တတိဿမထေရ်ဖြစ်၍
အရှင်ယသမထေရ်တို့က အဓိက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပါသည်။
အဖွဲ့ဝင်သံဃာတော်အရေအတွက်မှာ (၁၀၀၀) ဖြစ်ပါသည်။ ဤသံင်္ဂါယနာတင်ပွဲ၌၀ိနည်းရေးရာများကို အဓိကထားကာ ဆွေးနွေးခြင်း ပြုလုပ်ကြပါသည်။
အထောက်အပံ့မင်းမှာ အသောကမင်းကြီးဖြစ်ပါသည်။ ဤတတိယသင်္ဂါယနာသည် (၉)လကြာပါသည်။
တတိယသင်္ဂါယနာတင်ပြီးချိန်ကစပြီး (၉)တိုင်း (၉)ဌာနတို့သို့
အရှင်မဟာမောဂ္ဂလိပုတ္တတိဿမထေရ်နှင့် အသောကမင်းကြီးတို့ တာဝန်ယူကာ သာသနာပြုစေလွှတ်တော်မူပါသည်။
(၉)တိုင်း (၉)ဌာနနှင့် သာသနာပြုမထေရ်များ-
၁။ ကသ္မီရနှင့်ဂန္ဓာရအရပ်=အရှင်မဇ္ဈန္တိကမထေရ် ဦးဆောင်ကာကြွ။
၂။ မဟိံသကအရပ်=အရှင်မဟာဒေ၀မထေရ် ဦးဆောင်ကာကြွ။
၃။ ၀န၀ါသိအရပ်= အရှင်ရက္ခိတမထေရ် ဦးဆောင်ကာကြွ။
၅။ မဟာရဋ္ဌအရပ်= အရှင်မဟာဓမ္မရက္ခိတမထေရ် ဦးဆောင်ကာကြွ။
၆။ ယောနကအရပ်=အရှင်မဟာရက္ခိတမထေရ် ဦးဆောင်ကာကြွ။
၇။ ဟိမ၀န္တာအရပ်= အရှင်မဇ္ဈိမမထေရ် ဦးဆောင်ကာကြွ။
၈။ သုဝဏ္ဏဘူမိအရပ်= အရှင်သောဏမထေရ်နှင့် အရှင်ဥတ္တရမထေရ်တို့ ဦးဆောင်ကာကြွ။
၉။ တမ္ဗပဏ္ဏိ (သီဟိုဠ်)အရပ်=အရှင်မဟိန္ဒမထေရ် ဦးဆောင်ကာကြွ။
(B.C 94/ B.E 450) သာသနာတော်သက္ကရဇ် (၄၅၀)-အရောက်တွင် သီဟိုဠ်၊ မလယဇနပုဒ်၊အာလောကလှိုဏ်တွင် စတုတ္ထသင်္ဂါယနာတင်ပါသည်။
မဟာဓမ္မရက္ခိတမထေရ်ဖြစ်၍ အဖွဲ့ဝင်ဆရာတော်အရေအတွက်သည် (၅၀၀) ဖြစ်ပါသည်။
-၁-နှစ်အချိန်ယူကာ သင်္ဂါယနာတင်ခဲ့ကြပါသည်။ အထောက်အပံ့ပေးသောဒကာသည်ဝဋ္ဋဂါမဏိမင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤစတုတ္ထသင်္ဂါယနာတွင် ပိဋကတ်တော်များကို ပေရွက်တွင်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ 3rd Century A.D-တွင် ဗုဒ္ဓသာသနာ စတင်ရောက်ရှိပါသည်။
တရုတ်နိုင်ငံမှာ 1st Century A.D-တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာစတင်ရောက်ရှိပါသည်။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာ A.D 189-တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာစတင်ရောက်ရှိပါသည်။ တရုတ်မှတဆင့်ရောက်ရှိခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ A.D 372-နှစ်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာစတင်ရောက်ရှိပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံသို့ A.D ၅၅၂၊ သာသနာတော်နှစ် -၁၀၉၅-တွင် ဗုဒ္ဓသာသနာစတင်ရောက်ရှိပါသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသို့ A.D -၅-ရာစုတွင့် ဗုဒ္ဓဘာသာစတင်ရောက်ရှိပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ A.D -၆-ရာစု၊ သာသနာတော်နှစ် -၁၃၀၀-တွင်
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသို့ A.D -၆-ရာစုတွင် ဗုဒ္ဓသာသနာရောက်ရှိပါသည်။
တိဗက်နိုင်ငံသို့ A.D -၇-ရာစုတွင် ဗုဒ္ဓသာသနာစတင်ရောက်ရှိပါသည်။
ရုရှားနိုင်ငံသို့ A.D -၁၇-ရာစုတွင် ဗုဒ္ဓသာသနာစတင်ရောက်ရှိပါသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် A.D -၆-ရာစုလောက်ကစပြီး ဗုဒ္ဓသာသနာ တဖြေးဖြေး
မြန်မာနိုင်ငံ ပုဂံသို့ A.D -၁၁-ရာစုလောက်တွင် ဗုဒ္ဓသာသနာရောက်ရှိပါသည်။
အရှင်အရဟံနှင့် အနောရထာမင်းကြီးတို့ ဦးစီးကာ မြန်မာပြည်ဗုဒ္ဓသာသနာ
A.D -၁၈၇၁/ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်နှစ် -၂၄၁၅-ခု/ မြန်မာသက္ကရစ် -၁၂၃၂-ခုနှစ်၊တန်ဆောင်မုန်းလတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၊ မန္တလေးတောင်ခြေတွင်
ပဉ္စမသင်္ဂါယနာတင်ပါသည်။ ဦးဆောင်ဆရာတော်မှာ မန္တလေး၊
အဖွဲ့ဝင်ဆရာတော်အရေအတွက်မှာ ၂၄၀၀-ဖြစ်ပါသည်။ အထောက်အပံ့ဒကာမှာမင်းတုန်းမင်းကြီး ဖြစ်ပါသည်။
ဤ ပဉ္စမသင်္ဂါယနာတွင် ပိဋကတ်တော်များကို ကျောက်ထက်
အက္ခရာတင်ခြင်းဖြင့်သင်္ဂါယနာ တင်ခဲ့ကြပါသည်။ ကျောက်ချပ်ရေ-၇၂၉-ချပ်ရှိပါသည်။
ကျောက်ထက်အက္ခရာတင်ရာ၌ ကြာချိန်မှာ (၇)နှစ်၊ (၆)လနှင့် (၁၄) ရက်ကြာပါသည်။
A.D -၁၈၈၀-ခုနှစ်တွင် ဗုဒ္ဓသာသနာ့အလံကို အမေရိကန်နိုင်ငံသား စစ်ဗိုလ်ကြီး-Henry Steel Olcott-က စတင် တီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၌ ပထမဆုံးသော ဗုဒ္ဓသာသနာ့အဖွဲ့အစည်း-
A.D -၁၈၈၁-ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင်-ပါဠိကျမ်းစာအဖွဲ့အစည်း-ဆိုပြီး
ပထမဆုံးသော ပိဋကတ်အဖွဲ့အစည်း အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် စတင်ပေါ်ပေါက် ခဲ့ပါသည်။
တည်ထောင်သူမှာ -T.W. Rhys Davids- ဖြစ်ပါသည်။ သူသည် မူရင်း
A.D -၁၈၉၁-ခုနှစ်တွင် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှ
အနာဂါရိကဓမ္မပါလသူတောင်စင်ကြီးဦးဆောင်ကာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဗုဒ္ဓဂယာမှာ
မဟာဗောဓိအဖွဲ့အစည်းဆိုပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ ပြန်လည်တည်ထောင်ပါသည်။
A.D -၁၉၅၆-ခုတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံသား Dr. B.R Ambedkar-ဦးဆောင်ပြီး
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ဗုဒ္ဓသာသနာပိုမို ပြန့်ပွားအောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၅၆-ခု၊ အောက်တိုဘာ -၁၄-ရက်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံသား (၁)သန်းခန့်
A.D ၁၉၅၄-၅၆/ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်နှစ် ၂၄၉၈-ခု၊ မြန်မာသက္ကရဇ် ၁၃၁၆-ခု၊
ကဆုန်လပြည့်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ကမ္ဘာအေး၊
မဟာပါသာဏ လှိုဏ်ဂူ၌ ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာတင်ပါသည်။ ဦးဆောင်ဆရာတော်မှာ ညောင်ရမ်းဆရာတော် အရှင်ရေ၀တမထေရ်ဖြစ်၍၊ အဓိကတာဝန်ယူရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်သောမထေရ်များမှာ မဟာစည်ဆရာတော်နှင့် မင်းကွန်းဆရာတော်တို့ဖြစ်ပါသည်။
အဖွဲ့ဝင်ဆရာတော်အရေအတွက်မှာ ထေရ၀ါဒ (၅)နိုင်ငံ (သီရိလင်္ကလာ၊ မြန်မာ၊ထိုင်း၊ လော၊ ကမ္ဘောဒီယား)တို့မှ (၂၅၀၀)သော မထေရ်တို့ဖြစ်ပါသည်။ အခြားသောနိုင်ငံ (၂၄)နိုင်ငံတို့မှလည်း အကူအညီများ ပေးကြပါသည်။ အထောက်အပံ့ဒကာမှာ
၀န်ကြီးချုပ် ဦးနုနှင့် မြန်မာပြည်သူ၊ ပြည်သားများ ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ဤဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာတင်ပွဲမှာ ပါဠိတော်တင်မက အဋ္ဌကထာ၊ ဋီကာများကိုပါပြန်လည် စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြင့် သင်္ဂါယနာတင်ခြင်း
A.D -၁၉၆၅၊ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်နှစ် -၂၅၁၂-ခုနှစ်တွင်
ဆရာကြီးဦးဂိုအင်ကာဦးဆောင်ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀ိပဿနာတရားပြန်လည် အမြစ်တွယ်အောင် လုပ်ဆောင်ပါသည်။
Credit To : မြန်မာနိုင်ငံမှဘုရားများ သမိုင်း
(ဒု-မကောင်းသော+စရိတ-စရိုက်(အကျင့်)၊ မကောင်းသော ကိုယ်မှု၊ နှုတ်မှု၊ စိတ်မှု) ကို "ဒုစရိုက်" ဟုခေါ်၏။
ဒုစရိုက် ( ၁၀ ) ပါး ရှိပါသည်။
၁။ ပါဏာတိပါတ = သူ့အသက်သတ်မှု၊
၂။ အဒိန္နာဒါန = သူ့ဥစ္စာခိုးမှု၊
၃။ ကာမေသု မိစ္ဆာစာရ= သူ့သားမယား ကျူးလွန် ပြစ်မှားမှု။
၁။ မုသာဝါဒ = မုသားပြောမှု(လှည့်စားမှု)၊
၂။ ပိသုဏ၀ါစာ = ချောပစ်ကုန်းတိုက်မှု၊
၃။ ဖရုသ၀ါစ = အယုတ်တမာဆဲဆိုမှု၊
၄။ သမ္ဖပ္ပလာပ = ပိန်ဖျင်းသောစကားကိုပြောဆိုမှု။
၁။ အဘိဇ္ဈာ = သူတစ်ပါးစည်းစိမ်ကို မိမိပိုင်ဖြစ်အောင် ကြံစည်မှု၊
၂။ ဗျာပါဒ = သူတစ်ပါးကို သေကြေ ပျက်စီးရန် ကြံစည်မှု၊
၃။ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ = ကံနှင့်ကံ၏အကျိုး မရှိဟု အယူမှားမှု၊
ဥပါသကာတို့ သီလရှိသောသူ၏ သီလနှင့် ပြည့်စုံခြင်း၏ အကျိုး 'အာနိသင်' တို့သည် ဤငါးပါးတို့တည်း၊
ဥပါသကာတို့ ဤလောက၌ သီလရှိသော သီလနှင့်ပြည့်စုံသောသူသည် မမေ့လျော့ခြင်းကြောင့် များစွာသော စည်းစိမ်ဥစ္စာအစုကို ရ၏၊ ဤကား သီလရှိသောသူ၏ သီလနှင့် ပြည့်စုံခြင်း၌ ရှေ့ဦးစွာသော အကျိုးအာနိသင်တည်း။
ဥပါသကာတို့ တစ်ဖန်လည်း သီလရှိသော သီလနှင့်ပြည့်စုံသောသူအား ကောင်းသော ကျော်စော သတင်းသည် ပျံ့နှံ့၍ ထွက်၏၊ ဤကား သီလရှိသောသူ၏ သီလနှင့် ပြည့်စုံခြင်း၌ နှစ်ခုမြောက် အကျိုး အာနိသင်တည်း။
ဥပါသကာတို့ တစ်ဖန်လည်း သီလရှိသော သီလနှင့်ပြည့်စုံသောသူသည် မင်းပရိသတ် ပုဏ္ဏားပရိသတ် သူကြွယ်ပရိသတ် ရဟန်းပရိသတ် အလယ်သို့ ချဉ်းကပ်ခဲ့သော် မကြောက်မရွံ့ မျက်နှာ မညှိုးငယ်ဘဲ ချဉ်းကပ်ရ၏၊ ဤကား သီလရှိသောသူ၏ သီလနှင့် ပြည့်စုံခြင်းကြောင့် သုံးခုမြောက် အကျိုးအာနိသင်တည်း။
ဥပါသကာတို့ တစ်ဖန်လည်း သီလရှိသော သီလနှင့်ပြည့်စုံသောသူသည် တွေဝေခြင်း မရှိဘဲ သေရ၏၊ ဤကား သီလရှိသောသူ၏ သီလနှင့် ပြည့်စုံခြင်း၌ လေးခုမြောက် အကျိုးအာနိသင်တည်း။
ဥပါသကာတို့ တစ်ဖန်လည်း သီလရှိသော သီလနှင့်ပြည့်စုံသောသူသည် ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီး၍ သေပြီးသည်မှ နောက်၌ ကောင်းသော လားရာ နတ်ပြည်၌ ဖြစ်ရ၏၊ ဤကား သီလရှိသောသူ၏ သီလနှင့် ပြည့်စုံခြင်း၌ ငါးခုမြောက် အကျိုးအာနိသင်တည်း။
(၁၇၃ - ပါဋလိဂါမဝတ္ထု မှ၊ ဘေသဇ္ဇက္ခန္ဓက၊ မဟာဝဂ်ပါဠိတော်။)
"ဒါဖတ်ပြီး မှ ဘုရားဖူး ထွက်ကြပါ"
ဦးဆောင်သူများကညံ့၍လော၊ လူကြီး မိဘများကပင် သတိမမူမိကြသောကြောင့်လော၊ကာယကံရှင်တို့ကပင် စိတ်မ၀င်စားကြခြင်းကြောင့်လော၊အတိအကျမပြောတတ်ပါ။
ဥပမာ-"အိန္ဒိယဘုရားဖူးသွား၏၊ငွေကုန်၏၊ဗဟုသုတရရ၏၊ဗုဒ္ဓပူဇာဒါနကုသိုလ်များရရှိ၏၊ဒေသန္တရသုတများစွာရခြင်းနှင့်လူမှုရေး၊ဘာသာရေး၊ယဉ်ကကျေးမှုများတိုးပွားကာအဆင့်မြင့်လာစရာလည်းရှိပါ၏။သို့သော် "ဘုရားဖူးသွားခြင်းအတွက်အကျိုးများ၏"ဟုကား မဆိုသာကြောင်း ပြောလိုပါသည်။
စင်စစ်အားဖြင့် ဘုရားဖူးနည်းကိုသိပါက အကျိုးကြီးစွာရရှိမည်ဖြစ်သော်လည်း ဘုရားဖူးနည်း မတတ်ပါကအကျိုးကြီးမည်မဟုတ်ပါ။ဘုရားဖူးနည်းတတ်ပါကလည်းတမင်တကာကြီးဘုရားဖူးသွားသွား၊မသွားသွားအကျိုးကားများပြီးသားဖြစ်ပါ၏။သို့သော် ဘုရားဖူးနည်းကို အလေးအနက်ထားသူကား ရှားလှပေသည်။
တော်မူခဲ့ပြီး သက်တော်(၆၃)နှစ်ဝါတော်(၄၄)၀ါအရ (၁၃၆၂)ခုနှစ်တွင်ပျံလွန်တော်မူခဲ့ပါသည်)
ထို ဆရာတော်ကြီးသည် "ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား"သို့ တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်ပုံမှန်ဘုရားဖူးလေ့ရှိပါသည်။ ပုံမှန်သွား
ခြင်းမှာကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်မြတ်ထံ"ဘုရားဆုပန်"ထားရင်းအဓိဌာန်ရှိနေသောကြောင့် အဓိဌာန်ပါရမီကိုဖြည့်သောအားဖြင့် ဘုရားဖူးပုံမှန်ကြွတော်မူပါသည်။
ဆရာတော်ကြီးသည် အဓိကအားဖြင့်"သီလပါရမီ၊နေက္ခမ္မပါရမီ၊ပညာပါရမီ၊၀ီရိယပါရမီ၊သစ္စပါရမီ၊အဓိဋ္ဌာနပါရမီ" တို့ကိုဖြည့်ကျင့်သွားခဲ့သည်ဟုဆင်ခြင်ကြည်ညိုရပါသည်။ဆရာတော်ကြီးသည်ဘွဲ့ပေါင်းများစွာ (အဂ္ဂမဟာဂန္ထ၀ါစကပဏ္ဍိတ၊သ-စ-အ-ဓမ္မာစရိယ၊အင်္ဂုတ္တရနိကာယပါဠိပါရဂူ) ရထားခဲ့သော်လည်းရိုးသားဖြောင့်မတ်သောအနေ
အထိုင်ဖြင့်သင့်တင့်လျောက်ပတ်ရုံသာခြိုးခြံရောင့်ရဲစွာတစ်သက်ပတ်လုံးသီတင်းသုံးနေထိုင်ခဲ့ပါသည်။ မတော်လောဘ၊မတော်ဒေါသတို့ကိုဆရာတော်ကြီးထံ၌မတွေ့မမြင်ရပေ။ ကာမဂုဏ်အာရုံတို့မှလွတ်မြောက်အောင်တစ်ပါးတည်းတိတ်ဆိတ်စွာနေလျက်ပရိယတ္တိစာပေကိုပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။
"သီလက္ခန္ဓ ၀ဂ္ဂ အဋ္ဌကထာ" အစဦးမှာပင် "ဗြဟ္မဇာလသုတ်" ပါရှိပေသည်။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ ခြောက်ဆယ့်နှစ်ပါးနှင့်တကွ
သီလသုံးပါး စသည်များကို ဆရာတော်ကြီးစိတ်ဝင်စားတော်မူဟန်ရှိပါသည်။
အဓိကပြောလိုသည့်အချက်မှာ ဆရာတော်ကြီးအဓိဋ္ဌာန်ပါရမီအရ ဘုရားဖူးကြွခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဘုရားဖူးကြွသောအခါတိုင်းပင် ဆရာတော်ကြီး၏စိတ်အစဉ်ထဲတွင် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ဂုဏ်တော်များထင်
ဆရာတော်ကြီးသည်"သီလက္ခန်"လာ"သုတ္တန်ဒေသနာတော်ကြီး၁၃ခု"တို့အနက်"လေးခုမြောက်""သောဏဒဏ္ဍသုတ္တန်"ကြီးတွင်"ယူဇနာတစ်ရာကျော် ဝေးကွာရာ စမ္ပကတောအုပ်အတွင်း ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်သီတင်းသုံး
တော်မူရာသို့ ဘုရားဖူးထွက်လာသော စမ္ပာမြို့စားကြီး သောဏဒဏ္ဍ ၏ စိတ်ထဲတွင် သူ့အနေဖြင့် သိထား
သော ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော် ၂၉-ပါး(နှစ်ဆယ့်ကိုးပါး) တို့ကိုပွားများလျက်၊ပြောကြားလျက် ဘုရားဖူးထွက်လာကြောင်း"
သို့ဖြစ်၍ ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည်လည်း ဆရာတော်ကြီးအနေဖြင့်သိထားသော ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော် အနန္တ-အသင်္ချေယျ-အပရိမာဏ=(အဆုံးမရှိ-ဂဏန်းမရှိ-အတိုင်းအတာမရှိ)တို့ကိုဆင်ခြင်လျက်၊ရွတ်ဖတ်လျက်သာ ဘုရားဖူးထွက်ကြွလာလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ရပါသည်။
"ဘယ်လို ဘုရားဂုဏ်တော်များပွားများ၍ ဘုရားဖူးသွားခဲ့သနည်း"ဟု မေးလာငြားအံ့။
စင်စစ်အားဖြင့် ဘုရားဖူးသွားခြင်းသည် မသွားမီ အိမ်ကတည်းကစ၍ ဘုရားဂုဏ်တော်များကို သိသမျှဆင်ခြင်
ပြီး ဗုဒ္ဓပူဇာ ဒါနနှင့်တကွ သမထဘာဝနာ၊၀ိပဿနာဘာဝနာပွားများနေဖို့လိုပါသည်။
ဘုရားရင်ပြင်တော်မှပြန်မည်ပြုသောအခါမှာမူ မြတ်စွာဘုရားကိုယ်စားတော် ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကို ရိုသေစွာရှိခိုး
ကန်တော့လျှက် သက်တော်ထင်ရှား ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကဲ့သို့ ထင်မြင်အောင်အာရုံပြု ဖူးမြော်တတ်ဖို့လိုပါ
လည်းဂုဏ်တော်များကိုဆင်ခြင်ကာဘုရားအာရုံမပျောက်အောင်ဆောင်ထားဖို့လိုပါသည်။အ၀တ်အစားများလဲသည့်အချိန်ထိတ်ိုင်အောင် ဂုဏ်တော်များဖြင့် ထုံထားသင့်ပါသည်။
ဤသည်မှာ ဘုရားဖူးသွားနည်း၊ဘုရားဖူးခြင်း အကျင့်မြတ် ဖြစ်ပါသည်။
မြို့စားကြီး သောဏဒဏ္ဍ နှင့်တပည့်ပရိတ်သတ်များ၊စမ္ပာမြို့သူမြို့သားပုဏ္ဏားများ၊သူကြွယ်များမှာ ဤနည်းဖြင့်
သာလျှင် ယူဇနာတစ်ရာခရီးကို ရက်ပေါင်းတစ်ရာကျော်ကျော်(သုံးလကျော်ကျော်)ဘုရားဖူးထွက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရပါသည်။
ကြောင်းတွေ့ရှိရသဖြင့်အံ့သြရပါသည်။ဂုဏ်တော်(၂၉)ပါးကိုလေ့လာကြည့်သည့်အခါယခုသိထားဖူးသော ဂုဏ်တော်(၉)ပါး ကိုမတွေ့ရပါ။
သောဏဒဏ္ဍပုဏ္ဏားကြီးသည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဖြစ်သေးပါဘဲလျက်နှင့်ဂုဏ်တော်(၉)ပါးကိုသိခဲ့၊သီးခြားဂုဏ်တော်(၂၉)ပါးကိုသိခဲ့ကြောင်း လာရှိသည်ကိုထောက်၍ ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်ကို သိရှိ၊ရရှိထားခြင်းသည်ဘုရားဖူးသွားနည်း၏ သော့ချက်ကြီးပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်သေးသူ သောဏဒဏ္ဍပုဏ္ဏားကြီးလောက်ထိ ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်တို့ကို မသိစေကာမူ၊မရစေကာ
မူ၊အနည်းဆုံးအားဖြင့်"အရဟံ"အစရှိသော မူလဂုဏ်တော်ကြီး(၉)ပါးလောက်ကိုတော့သိထားမှသာ၊ရထားမှသာ တန်ဖိုးကြီးသောဘုရားဖူးခြင်း ရရှိလာမည်ဖြစ်ပါကြောင်းလေးစားစွာတင်ပြအပ်ပါသည်။
ဒီဃနိကာယ်၊သီလက္ခန်ပါဠိတော် သောဏဒဏ္ဍသုတ်" တွင် အကျယ် ရှာဖွေဖတ်ရှုစေလိုပါသည်)
(၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ဇွန်လထုတ်၊ "ဓမ္မရံသီ ဓမ္မမဂ္ဂဇင်း"မှ"ဆရာတော်-မစိုးရိမ်စာသင်သား"၏"ကုဋေတစ်သန်း ခြေတစ်လှမ်း"အမည်ရ ဆောင်းပါးများကို မှီငြမ်း၍ ,ပြန်လည်,မျှဝေ,ဓမ္မဒါနပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်)
မှတ်ချက်။ ။ ဤဘလော့ဘ်ပို့စ်အား မဖတ်ရသေးသူများ၏ဗဟုသုတအကျိုးငှာရည်ရွယ်၍မျှဝေဓမ္မဒါနပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဖတ်ပြီး, သိပြီးသူများ,အတွက်အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါသည်။
“ ဗုဒ္ဓတံဆိပ် ခပ်နှိပ်ကြစို့ ”
“ အိုးမဖုတ်ခင် အိုးလုပ်စဉ်ဝယ်
ကိုယ်စီတံဆိပ် ခပ်နှိပ်သောဝ်။ ။ ”
ဗုဒ္ဓဘာသာ Top 20
တကယ်သိသင့်တယ်ထင်လို့ သယ်ရင်းများအတွက် တင်ပေးလိုက်တယ်နော်
ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရတာဂုဏ်ယူတယ်ဆိုရင် Share သွားပါ...။
(၁) အမေး ။ နွားနက်လေးခု၊ ဝှေ့မှုဟန်ပြင်၊ မဝှေ့ကြဘဲ၊ ရှောင်လွဲသည်မြင်။
အဖြေ။ အရှေ့အနောက်၊ တောင် မြောက် မိုးဆင်၊ ခြိမ်းသံပေး မိုးဝေးလွင့်ပျောက်စင်။
- အရပ်လေးမျက်နှာမှ လေးခုသော နွားလား ဥသဘတို့သည် လာလတ်၍ မင်းရင်ပြင်၌ ဝှေ့မည်ဟု တွန်မြည် ကြုံးဝါးလျက် မဝှေ့ပဲသာလျှင် ဖဲလေကုန်သည်ဟု မြင်မက်ပါသည်။
- နောင်အခါ တရားမစောင့်သော မင်းတို့ လက်ထက်၌ အရပ်လေးမျက်နှာမှ မိုးတို့သည် ရွာအံသကဲ့သို့ ထစ်ကြိုးလျက် မရွာပဲသာလျှင် ပျောက်ပျက် ကုန်လတ္တံ့။ ထိုအခါ ကောက်ပဲသီးနှံတို့ ပျက်ဆီး၍ လူတို့၌ အစာရေစာ ရှားပါး ငတ်မွတ်ခြင်း ဖြစ်လတ္တံ့။
ဥပရိပဏ္ဏာသ ပါဠိတော်၊ ဒက္ခိဏဝိဘင်္ဂသုတ်တော်လာ
၁ . တိရစ္ဆာန် ။ Continue Reading
နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းတရားကို "မဂ်" ဟုခေါ်သည်။ မဂ်၏အကျိုးတရားကို "ဖိုလ်" ခေါ်သည်။ ရာဂ၊ ဒေါသ၊ မောဟတို့၏ကင်းဝေးရာငြိမ်းအေးခြင်းဓါတ်သဘောကို "နိဗ္ဗာန်" ဟုခေါ်သည်။
ပစ္စည်းဥစ္စာ အာဏာရာထူး အခြွေအရံ အကျော်အစောကို လိုချင်တပ်မက်သူတို့သည် ညစ်ညူး နောက်ကျူးသော စိတိရှိကုန်၏။
အချင်းချင်းရန်လို မုန်းထား ကြကုန်၏။ဆန့်ကျင် ငြင်းခုန်ကြကုန်၏။
ထိုကြောင့် ကာမဂုဏ် ဟူသည်မှာ မိတ်ဆွေမဟုတ်။
ရန်သူသာတည်း ... ။
ဗုဒ္ဓ ဟောကြားသော လူသားများဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်း ......
ဖန်ဆင်းရှင်ကို လက်မခံသော (Atheism) ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီးနှင့် လူသားများဘယ်လို ဖြစ်ပေါ်လာရသလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဘာသာခြားတစ်ယောက်က မေးလာတဲ့အခါ ဖြေကြားနိုင်ဖို့ ဒီစာလေးကို ရေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်....။
ကျွန်တော်တို့ နေထိုင်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးဟာ အစ ကနဦးမှာ ရေ သို့ မဟုတ် လေ သို့ မဟုတ် မီး တစ်ခုခုနဲ့ ပျက်စီးခြင်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်...ဒါဟာ ကမ္ဘာတစ်ခု ပျက်စီးစေတဲ့ ကပ်ဘေးတွေဖြစ်ပါတယ်...။
ဒီလို ကမ္ဘာပျက်ခါနီး အချိန်တိုင်း ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ လူသားတွေဟာ ကောင်းမှုတွေ လုပ်ကြတဲ့အတွက်... ၃၁ ဘုံ မှာ ဗြဟ္မာ ဖြစ်ကြပါသတဲ့...၊ အကုသိုလ်လုပ်တဲ့သူတွေ ကတော့ ငရဲ ကျတာပေါ့...၊
ဗုဒ္ဒဟောတဲ့ လမ်း ၃ လမ်း
၁။ ကံလမ်း.......... ဒါန ၊ သီလ၊ ကုသိုလ်ကံက နတ်ပြည်၊ လူ့ပြည် ၊ သုဂတိဘုံဘ၀သို့ရောက်စေတယ်။
၂။ ဈာန်လမ်း........ သမထ ဘာဝနာပွားလျင် ဗြဟ္မာပြည်ရောက်စေတယ်။
၃။ ညဏ်လမ်း..... ၀ိပသနာပွားလျှင် နိဗ္ဗာန်ရောက်စေတယ်။
( ko akm ဘာသာရေးမှတ်စုများ )
အဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် ဘုရားရှိခိုးနေစဉ်အချိန်မှာ မဟာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက
် မဟာကုသိုလ်စိတ် ရရှိ တယ်လို့ပြောရပါမယ်၊ မဟာကုသိုလ်စိတ်က ဘယ်လောက်အကျိုးပေးသလဲလို့ ထပ်ဆင့်မေးမြန်းရင် ဘုရားရှိခိုး ရတဲ့အတွက် အကျိုးတရား (၁၇)ပါးကို ဆုမတောင်းဘဲရရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေကတော့.......
(၁) စေတီအိမ်နှင့်တူသည်ဖြစ်၍ သူတစ်ပါးတို့ရှိခိုးထိုက်ခြင်း၊
(၃) သေသောအခါနတ်ပြည်စသည့်ကောင်းသောသုဂတိ ဘ၀သို့ ရောက် ရခြင်း
~~~~ ဒါန ~~~~
မြတ်စွာဘုရားက ဒါနဆိုတာ ရဟန်းရော၊ လူရော
စေတနာရယ်၊ ပစ္စည်းဝတ္ထုရယ်၊ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ရယ်ပါ။
စေတနာရှင် Menber များ
စေတနာရှင် ၀င်ရောက် လေ့လာသူများ
သင့် Email လိပ်စာထားခဲ့ပါ။ Post အသစ်တင်တိုင်း ပို့ပေးပါ့မယ်။
စာပေဟောပြောပွဲများစုစည်းမှု ( MP3)
‎ စာပေဟောပြောပွဲ အခွေများစုစည်းမှု စာရေးဆရာ၏မှတ်စု (စင်္ကာပူ ၂၀၀၉) (ဂျူး) http://www.mediafire.com/ download.php?5xp4ca11zvxxbhp ဘ...
ရန်ကုန်မြို့တွင်နေထိုင်ကြသော ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ၊ နိုင်ငံဝန်ထမ်းများ၊ လက်လုပ်လက်စားများ မှာ ဘတ်(စ်)များကိုသာအားထားပြီး သွားလာလုပ်က...
ဘောကျခြင်း(၀ါ)အူကျခြင်းဝေဒနာသည်အမျိုးသားများ၌သာဖြစ်ပွားလေ့ရှိသောဝေဒနာဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ဘောကျ(အူကျ)ဖြစ်လာလျှင်သက်သာပျောက်ကင်းအောင်...
စေတနာရှင်ပရဟိတလူငယ်အသင်းသို့ ရန်ကုန်မြို့မှ အလှူရှင်များစာရင်း
စေတနာ ရှင်ပရဟိတလူငယ်အသင်းသို့ ရန်ကုန်မြို့မှ အလှူရှင်များစာရင်း
၂၀၁၃-ခုနှစ်၁၂ ရာသီ ဟောကိန်းများ (စံဇာဏီဘို) ============================== = (မိမိတို့ မွေးဖွားသည့် နေ့အလိုက်စာအုပ်များကိုအောက်ပါ...
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး သာစည်မြို့ အမှတ်(၇)ရပ်ကွက် နဘဲရွှေထီးလမ်း တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော ရွှေစည် ပရဟိတ ဂေဟာဧရိယာအတွင်း၌ ရွှေတိဂုံပုံစံတူ ကိုးတောင်ြ...
CubitZaw1984@gmail.com. Theme images by tjasam. Powered by Blogger.